Ikhaya AMAKHASI E-CLASSIC George Weah Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba egcwele yomsunguli weBhola kanye noMongameli owaziwa kakhulu ngeSiteketiso; 'King George'. Indaba yethu yeGeorgia we-Childhood kanye ne-Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni, impilo yomshado nezinye izinto ezingaziwa kakhulu ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi mayelana ne-ballon d'or ne-Liberia indima kaMongameli kodwa bambalwa abhekisela ku-biography kaGeorge Weah. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
George Weah Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
UGeorge Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah wazalwa ngo-1st Okthoba 1966 (yobudala 51), Monrovia, eLiberia.
UGeorge empeleni wakhuliswa ngumkhulu wakhe ngemva kokufa kukayise. Wakhulela eWest Point, isikhulu esiphezulu esisebenza ngamagundane omakhelwane. Ungelungu le- Kru uhlanga, isichotho esivela eningizimu-mpumalanga yeLiberia Isikhulu sase-Grand Kru, enye yezindawo ezimbi kakhulu zezwe.
George Weah Indaba Yobuntwana
Waya esikoleni esiphakathi e-Muslim Congress nasesikoleni esiphakeme e-Wells Hairston High School futhi kubikwa ukuthi waphuma ngonyaka wakhe wokugcina wezifundo. Uqale ukudlala ibhola yeqembu elincane labadlali abasinda ngesikhathi se-15 futhi kamuva wathuthela kwamanye amaqembu eqembu lebhola lezinyawo, ephethe izindima zeMighty Barrolle ne-Invincible Eleven lapho ehola khona imigomo ye-24 ekubukeni kwe-23.
Ngemuva kokuphakama, iqembu laseCameroon limbonile futhi layisayina iqembu eliphezulu, iJaound side FC. Umsolwa waseCameroon uClaude Le Roy, udlulisele izindaba zamandla kaWeah kumphathi we-AS Monaco u-Arsène Wenger. UWenger wagijima waya e-Afrika ukuzobukeka, wabe esayina i-Weah eqenjini lakhe.
Ngaphambi kokuba umsebenzi wakhe wezemidlalo uvumeleke ukuba ahambe phesheya kwelinye izwe, uWaah wasebenza eLiberia Telecommunications Corporation njengendlela inkinobho yokushintsha. Waba ngowokuqala, futhi cishe kuphela, uLiberia ukwenza uphawu eYurophu. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
George Weah Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
U-Clar Weah ungumfazi kaGeorge Weah. Ungumakhelwane waseMelika waseMelika wezemvelo ngezimpande zomzali ezivela eJamaica.
Wakhulela eFlorida, eU.S., lapho egijima khona amabhizinisi amaningana kuhlanganise nokudlela okucebile kweCaribbean kanye nesitolo.
Ngokombiko, uGeorge noClar bahlangana e-US egatsheni laseChase Bank lapho uClar esebenza njengesikhulu sezinkonzo zamakhasimende. Lowo owayengumdlali we-AC Milan kubike ukuthi uhambe ebhange ukuvula i-akhawunti lapho amehlo akhe ebamba iJamican enhle. Indaba yabo yothando ithatha ngokuqinile futhi iqhubeke ikhula ngamandla naphezu kwamahemuhemu amaningi okungathembeki okulandelanayo.
UClar, obengafani nabesifazane abaningi baseCaribbean, ugqoke ngokumane, akabheki nje kuphela njengombhali ohlakaniphile kodwa nomuntu ohlukumeza kakhulu, futhi ukumamatheka kwakhe okukhanyayo ngisho nasezikhathini ezinzima kukwazi ukuphula izivimbelo. Vala amalunga amchaza ukuthi uhlakaniphile futhi unomhlobo okhethekile we-aura. I-Jamaican isebenzisa amandla amaningi azungeze umyeni wayo. Bobabili banezingane ezintathu: uGeorge Weah Jr, uTita noThimothewu.
UTimothy Weah, indodana yomdlali we-1995 Ballon d'Or uGeorge Weah, usayine isivumelwano sakhe sokuqala neParis Saint-Germain.
INdodana kaGeorge Weah- uThimothewu
I-17 eneminyaka emithathu ubudala ilandela izinyathelo zikayise, owachitha iminyaka emithathu eqenjini leLigue 1, ngaphambi kokuba athuthele e-AC Milan. UThimothewu wajoyina i-PSG's academy ku-2014 futhi uye wabonakala kokubili u-U-15 no-U-19.
George Weah Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
Uyise, uWilliam T. Weah, uSr. kwakuyimishini ngenkathi unina, u-Anna Quayeweah engumdayisi. Unezihlobo ezintathu, uWilliam, uMose noWolo.
UGeorge Weah wayengomunye wabantwana abayishumi nesishiyagalolunye owakhuliswa ngumkhulu wakhe ongumKristu ozinikela ngobuqotho, U-Emma Klonjlaleh Brown ngemuva kokuhlukana kwabazali bakhe.
George Weah Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Impumelelo YaseYurophu
Yebo, wayeyilenta eliluhlaza elinokuqeqeshwa okuncane okusemthethweni. Kuvele sengathi u-Weah wagxila kakhulu emsebenzini wakhe waseYurophu. Kodwa-ke, umshayeli we-6'2 onamandla washeshe wabamba umncintiswano futhi waba ngumdlali obulala umgomo obulalayo.
Ukuthuthela eParis Saint-Germain kwaletha ukuhlonipha u-Weah, owasiza iqembu lakhe ukuba liwine iFrance Cup ku-1993 kanye nesihloko seLigue 1 ku-1994. Ngokungaqiniseki ngesikhathi sonyaka we-1994-95, wathwala i-PSG eFrance naseLigue Cup ukunqoba futhi waqeda njenge-scorer ehamba phambili ye-Champions League. Ngemuva konyaka, wabizwa ngokuthi yi-African, European and FIFA World Player of the Year-okungakaze kwenzeke.
George Weah Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Fight
I-Weah ivinjelwe emidlalweni eyisithupha yaseYurophu ngokuphula iphunga lomvikeli wesiPutukezi Jorge Costa ngo-20 November 1996 emgodini womdlali ngemuva kokudweba kukaMilan ePorto e-Champions League. UWaah uthe waphuthuka ekukhungathekeni ngemuva kokubekezelela ukuhlambalaza ngokobuhlanga kusukela Costa phakathi kokubili imidlalo yamaqembu e-Champions League ekwindla.
I-Costa igxeke ngokuqinile ukuphikwa kobuhlanga futhi ayikwazanga u-UEFA ngoba akekho ofakazi abangase baqinisekise izinsolo zikaTaah, ngisho nabalingani bakhe baseMilan. UWaah wazama ukuxolisa eCosta kodwa lokhu kwahlukunyezwa yiPutukezi, eyabheka ukuthi amacala okuhlukunyezwa ngokobuhlanga ayemangalelwa ukuba ahlambalaze futhi athathe iLiberia enkantolo.
Lesi sigameko senze ukuba eCosta ihlinzekwe ebusweni futhi ngemuva kwalokho kwasuswa amasonto amathathu. Naphezu kwalesi sigameko, u-Weah usalithola i-FIFA Fair Play Award ku-1996.
George Weah Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Inkolo
U-Weah waphenduka ebuKristwini bamaProthestani waya e-Islam, ngaphambi kokuguqula emuva. Uthemba ukuthula kumaSulumane namaKhristu, futhi athi "Abantu abodwa".
I-Weah iphinde yenza amaProthestani.
Ngo-Okthoba 2017, wabonwa esontweni elivelele laseNigeria likaMfundisi we-TB uJoshuwa kanye neSenenja yaseLiberia Prince Yormie Johnson.
TB UJoshua kuthiwa ube yithonya eliyinhloko esinqumweni sikaJohnson sokuvumela ukhetho luka-Weah okhethweni lwe-2017 yaseLiberia.
George Weah Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Indodana Yeqiniso yaseLiberia
U-Weah wabambe iqhaza kakhulu ezindabeni zezwe lakhe eliqothulwa yimpi-mlilo ngenkathi eqhubeka nokudlala kwakhe.
Eqaphela ukubaluleka kwebhola njengamandla okuqinisa eLiberia, uWah wasebenzisa imali eyi-$ 2 ngemali yakhe ngemali yokuhamba, imishini kanye nemholo yeqembu likazwelonke, iLone Stars.
George Weah Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Ubuntu
UGeorge Weah unesici esilandelayo ebuntwini bakhe.
Amandla: UGeorge Weah uyabambisana, unobumbano, unomusa, unengqondo, umphakathi
Ukubuthakathaka: UGeorge Weah wayengase abe Indecisive futhi unesihawu. Ngaphezu kwalokho ugwema izingxabano futhi angathwala intukuthelo.
Yini uGeorge Weah ayithandayo: Ukuvumelana, ububele, ukwabelana nabanye futhi ekugcineni, impilo yangaphandle.
Okushiwo nguGeorge Weah: Ubudlova, ukungabi nabulungisa, ama-loudmouth nokuvumelana.
Ngombhalo jikelele, uGeorge unokuthula, unobulungisa, futhi uyazonda ukuba wedwa. Ukubambisana kubaluleke kakhulu kuye.
George Weah Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -UMongameli
UGeorge Weah wagijimela isikhundla sikaMengameli waseLiberia njengelungu leCongress for Democratic Change ku-2005, kodwa walahlekelwa ukugijima ku-Ellen Johnson Sirleaf we-Unity Party. Ku-2011, waphinda wathatha ithikithi le-CDC, manje njengomphathi wongameli, kepha uSirleaf wahlala ehhovisi.
Ukuntuleka kwezemfundo kaWeah kwaba inkinga yomkhankaso. Uye wabagxeka kakhulu labo abathi akafanelekile ukubusa. Ekuqaleni wathi wayephethe i-BA degree e-Sports Management evela e-Parkwood University eLondon, kodwa lokhu kuyisigungu se-diploma esingagunyaziwe esinikeza izitifiketi ngaphandle kokufundwa. U-Weah wabe eseqhuba i-degree ekuphathweni kwebhizinisi e-DeVry University eMiami.
Naphezu kwezingqinamba zezombangazwe, u-Weah usalokhu enamandla kakhulu futhi ethandwa kakhulu ezweni lakubo. Ngo-Ephreli 2016, Weah wamemezela ngenhloso yakhe yokugijima uMongameli waseLiberia okwesibili. I-Football God ekugcineni yaba nguMongameli waseLiberia ngoDisemba 2017 ngemuva kokunqotshwa Vice President Joseph Boakai.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Our George Weah Childhood Story kanye namaqiniso angama-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.